Miyuu Neymar Jr U Adkaysan Doonaa Ganaaxyada Lacageed Ee Ay PSG Ku Ciqaabayso Muddada Uu Gadoodka Ku Maqan Yahay? Imisa Ayuu Ku Waayi Doonaa? - Gool24.Net
Miyuu Neymar Jr U Adkaysan Doonaa Ganaaxyada Lacageed Ee Ay PSG Ku Ciqaabayso Muddada Uu Gadoodka Ku Maqan Yahay? Imisa Ayuu Ku Waayi Doonaa?
Kooxda PSG iyo Neymar JR ayaa madaxa iskula jira waxayna isku khilaafsan yihiin bixitaanka uu xidiga reer Brazil ku doonayo in uu Barcelon augu laabto waxayna taasi keentay in uu tababarka ilaa hadda ka soo xaadiri waayay.
PSG ayaa balan ku qaaday in ay talaabo ku haboon ka qaadi doonto Neymar Jr taas oo waqti xaadirkan noqonaysa in ay samayso waxa ay awoodi karto oo ah in ay dhexda u gasho dhaqaalaha badan ee ay bishii siisyo xidiga reer Brazil.
Sannadkii la soo dhaafay shabakada sir faafiyaha Football Leaks ayaa shaacisay in qandaraaska Neymar ee PSG inay ku jirto qodob ku abaalmarinaya xiddiga reer Brazil lacag haddii uu si wanaagsan u dhaqmo, qodobkaas ayaa ahaa in xiddiga reer Brazil uu helayao 375 kun euro bil walba oo uu dabci wanaagsan la yimaado.
Hadaba lacagtaas laguma abaalmarin doono bishaan madaama uu ku guuldareystay inuu soo xaadiro tababaraka kooxda inkastoo uu dhaawac ka soo kabsanayo.
Dhamaan ciyaartoyda Paris Saint-Germain ayay qodobkaas abaalmarinta ah ugu jirtaa qandaraasyadooda inkastoo ay kala lacag badan yihiin, xitaa ciyaartoyda akadeemiga ayaa qaata, waana wax caadi ka ah France madaama kooxaha aysan lacag ku ganaaxi karin ciyaartoyda kuwaasoo qaata mushahar go’an.
Taas bedelkeeda, PSG waxa ay u diidi kartaa lacagta abaalmarinta ah haddii ay si xun u dhaqmaan iyadoo lacagtaas la siinayo hay’ada tabarucaada ee Paris Saint-Germain.
PSG ayaa beenisay wararkii sheegayay inay Neymar ku siiyaan lacag abaalmarin ah marka uu u sacbiyo taageerayaasha kooxda, laakiin qodobka dabci wanaaga intaas waa ka qoto dheer yahay.
“Waxaa ciyaartoyda lagu abaalmariyaa inay la yimaadaan dabeecad lagu dayan karo oo la xiriirta sida ay u la dhaqmaan shirkadaha xayaysiinta, kooxaha naga soo horjeeda, garsoorayaasha, madaxda iyo ilaalinta waqtiga iyo dadaalka ay ku bixiyaan tababarka” ayay tiri kooxda.
“Xitaa inay ixtiraamaan saaxafada ayaa qeyb ka ah lacagta lagu siinayo dabci wanaagooda.”
Dib u dhac ama hadalo xanaf leh oo ay sameeyaan ciyaartoyda PSG ayaa sidoo kale ka hor istaagi karta inay helaan lacagtaas sida ku dhacday qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda.
Serge Aurier, Adrien Rabiot, Edinson Cavani iyo Marco Verratti ayaa ka mid ah ciyaartoyda hore u waayay lacagta abaalmarinta ah iyadoo lagu helayo danbiyo ay ka mid yihiin inay dhaleeceeyeen xiddigo ay isku koox yihiin ama inay ka soo daaheen tababarka kooxda sida haatan uu sameynayo Neymar.
Inkastoo mushaharka guud ee Neymar uu sannadkii gaaraya 34 milyan euro, hadana ma heli doono lacagtaas abaalmarinta ah marka mushaharkiisa loo dirayo dhamaadka bishaan July.